Tỏi tía - Theo góc nhìn khoa học | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Tỏi tía – Theo góc nhìn khoa học | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Igalikhi emfusa kudala isaziwa ngokuvuselela ukuphefumla kunye neepropathi zokunyusa amajoni omzimba. Iingcali zenzululwazi ziye zafumanisa ukuba eyona nto iphambili kwigalikhi emfusa ineekhompawundi zesulfure. Iziphumo zegalikhi emfusa: ukukwazi ukulawula i-cholesterol epheleleyo, inceda ukunciphisa i-cholesterol yegazi, ukukhusela i-atherosclerosis, isibindi esinamafutha.
Imifanekiso yeGarlic emfusa
Ngezifundo ezininzi zesayensi kunye namava abantu abayisebenzisayo, igalikhi ayikona nje ukutya okumnandi kodwa ineempembelelo ezininzi ezibalulekileyo ze-pharmacological ezisetyenziselwa ukunyanga izifo.
Ezi ziphumo ziye zaphononongwa ngobuchule kwaye zapapashwa ngokubanzi kwiijenali zenzululwazi ezidumileyo kwihlabathi jikelele. Izazinzulu zikholelwa ukuba ikonofile inamandla okuthintela nokunyanga izifo ezininzi ezinganyangekiyo ezifana nesifo seswekile, isifo sokuqina kwemithambo-luvo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, nomhlaza.
1. Eyona nto isebenzayo eyenza igalikhi isebenze
Ngo-1951, iikhemisti ezimbini zaseSwitzerland, u-Arthur Stoll kunye no-Ewald Seebeck, bafumana eyona nto isebenzayo enzulu kwi-clove yegalikhi kwaye bayibiza ngokuba yi-Alliin (ethiywe ngegama lesayensi yegalikhi, i-Allisa). Le yinto yesulfure (enesulfure kwi-molecule). Nangona kunjalo, le nto ayinayo impembelelo yezinto eziphilayo kwaye ayidali incasa yegalikhi.
Uphononongo lwamva luye lwafumanisa ukuba le nto xa ibonakaliswe emoyeni kwaye iphantsi kwesenzo se-Allinase enzyme (kwakhona kwigalikhi) iya kuguqula i-Allicin. Le nto idala incasa yeempawu kwaye yeyona nto isebenzayo kwigalikhi.
Ukongeza kwi-Allicin, ikonofile ikwanezinye iikhompawundi zesulfure ezingaphezulu kwe-33 ezifana ne-ajoene, allylpro-pyl disulfide, diallyl trisulfide, sallylcysteine, vinyldithiine, S- allylmercaptocysteine… Kunye neAllicin, ezi khompawundi zesulfure zidala incasa ebukhali yegalikhi. Ezi zinto zigcinwa kwiingxowa ze-oyile nzulu kwi-clove yegalikhi.
Iingcali zenzululwazi nazo zifumene kwigalikhi ezininzi iivithamini, iiminerali (ingakumbi i-selenium), ishukela, i-amino acids … Nangona kunjalo, uphando lwezenzululwazi lubonise ukuba uninzi lweziphumo ezixabisekileyo zezinto eziphilayo zegalikhi zibangelwa izinto zesulfure, ngakumbi i-Allicin. Ngoko ke, ukutsalwa kweoli yegalikhi equlethe ezi zithako ezisebenzayo, ukuguqula i-alliin ibe yi-allicin kunye nokuzinzisa kusoloko kuyisihloko esinomdla kwizazinzulu emhlabeni jikelele. Ezi zilandelayo ziziphumo ezixabisekileyo ukuba ioli yegalikhi (equlethe i-allicin kunye nezinto ezithile zesulfure) izisa kwimpilo yabantu.
2. Igalikhi emfusa ngokwembono yesayensi
Ioli ikonofile iyayinciphisa icholesterol embi ( LDL ) esegazini
Ioli yegalikhi inceda ukunciphisa i-cholesterol yegazi iyonke, i-triglycerides kwaye ngakumbi i-LDL, uhlobo lwe-low-density lipoprotein.
Le cholesterol embi, xa le nto ikhona kakhulu egazini, iya kwandisa umngcipheko wokwenza amacwecwe e-atherosclerotic emithanjeni yegazi, ithintele ukuhamba kwegazi emzimbeni, ngaloo ndlela ikhokelela kumngcipheko wezifo. i-atherosclerosis, uxinzelelo lwegazi, i-myocardial infarction kunye nokubi, okukhokelela ekubetheni.
I-Allicin kunye ne-organic sulphur compounds kwi-oyile yegalikhi inamandla okuqokelela ezi cholesterol embi kwaye ziguqulele kwiimveliso ezingenabungozi eziye zipheliswe ngeendlela ezahlukeneyo.
Ioli yegalikhi icoca amanqatha esibindini ngokukhawuleza
I-Allicin kwioli yegalikhi inamandla okuthintela ukuhlanganiswa kwe-cholesterol esibindini, ngokuthintela i-enzyme HMG – CoA reductase. Le yi-enzyme edlala indima ebalulekileyo kwi-synthesis ye-cholesterol esibindini.
Ngoko ke, ioli yegalikhi inefuthe lokuthintela ukuqokelela kwamafutha kwiiseli zesibindi, ukucima amanqatha aqokelelwe kwisibindi ngokukhawuleza kunye nokuphucula umsebenzi wesibindi.
Ukongeza, ioli yegalikhi nayo inefuthe le-vasodilator eyandisa ukuhamba kwegazi kunye nokuhamba kwegazi esibindini, ngaloo ndlela inceda isibindi ukuba sikhuphe ngokukhawuleza.
Ioyile ikonofile inciphisa i-viscosity yegazi, ikhusela ukwakheka kwamahlwili egazi, kwaye inceda igazi ukuba lijikeleze ngokulula emzimbeni.
I-Allicin kwioli yegalikhi kunye ne-metabolite yayo i-Ajoene inqanda ukwakheka kwamahlwili egazi – unobangela ophambili we-myocardial infarction, infarction ye-myocardial kunye nengozi ye-cerebrovascular.
U-Ajoene wafunyanwa kwioli yegalikhi nguGqr Eric Block, weYunivesithi yaseNew York.
Ngokutsho kwakhe, le nto iyasebenza njenge aspirin ekunciphiseni ukujika kwegazi, inexabiso eliphantsi kwaye ineziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa.
Oku kukwangqinelana nenkcazo kagqirha IS Menon kumazantsi eFransi, xa amahashe enamahlwili egazi emilenzeni yawo, amafama anokunyanga ngokutyisa igalikhi eninzi namatswele.
Isibhedlele saseNaval sase-US e-Camp Pend-leton, eCalifornia, sikwabhengeze ukuba ikonofile ineempawu ze-anticoagulant, ngoko inokwenza igazi likhululeke kwaye lithintele i-stroke, i-myocardial infarction ngenxa yamahlwili egazi. Nkqu notata wamayeza esintu aseIndiya uCharaka wabhala wathi “igalikhi inceda ukuhamba kwegazi, yenza intliziyo yomelele, kwaye yenza abantu baphile ixesha elide. Ngenxa yevumba layo elingemnandanga okanye ikonofile iya kuba nexabiso eliphezulu kunegolide.”
Oogqirha bamayeza bamandulo bathi ikonofile iyancipha igazi.Esi siphumo senzeke ngokukhawuleza, emva kweeyure ezimbalwa kuphela emva kwegalikhi, kodwa ikonofile inciphisa i-viscosity kuphela kwaye iyancipha igazi ukuya kumlinganiselo ophakathi, inceda igazi ukuba lijikeleze ngokulula ngaphandle kokubangela ukopha.
Ioli yegalikhi ngokuchasene noxinzelelo lwegazi oluphezulu
Ioyile yegalikhi ibisetyenziswa ukunyanga uxinzelelo lwegazi eTshayina kangangeenkulungwane. EJapan, amagosa ezempilo ayamkele ngokusemthethweni ikonofile njengeyeza loxinzelelo lwegazi. Ngenxa yempembelelo yokunciphisa amanqatha egazi kunye nokuchasana nokuguga, inceda iindonga zemithambo yegazi ukuba zibe ne-elastic ngakumbi, igazi lijikeleza ngokulula, elinegalelo ekunciphiseni uxinzelelo lwegazi.
Ngo-1948, uGqr FG Piotrowski eGeneva wothusa ihlabathi xa eveza iziphumo ezilungileyo xa esebenzisa ikonofile ukunyanga uxinzelelo lwegazi. kuncitshisiwe.
Izifundo eIndiya naseJamani ziye zavelisa iziphumo ezifanayo.
Isazi sebhayoloji uV. Petkov, oqhube izifundo ezininzi eBulgaria, wathi i-allicin kwigalikhi inokunciphisa uxinzelelo lwegazi lwe-systolic ngama-20-30 degrees, uxinzelelo lwegazi lwe-diastolic ngama-10 ukuya kuma-20 degrees.
Ioyile yeGarlic ilwa nomkhuhlane kunye nokukhohlela okuzingileyo okubangelwa yintsholongwane
Igalikhi kudala isetyenziswa ngoogqirha kwiindawo ezininzi zehlabathi ukuthoba ukhohlokhohlo, ukunqanda nokunqanda ukwanda komkhuhlane, nokubulala ezinye izifo ezibangelwa yintsholongwane.
Ngexesha lendyikityha yomkhuhlane eSoviet Russia ngo-1965, abantu baseRussia batya ngaphezulu kweetoni ezingama-500 zegalikhi ukukhusela umkhuhlane. Ngaphambi koko, ngo-1950, ugqirha waseJamani wachaza ukuba ioli yegalikhi inamandla okubulala iintsholongwane ezinobungozi ngaphandle kokulahlekelwa yintsholongwane ephilileyo emzimbeni.
UTarig Abdullah, iziko lophando eTampa, eFlorida, wabhengeza ngo-1987 ukuba ikonofile ekrwada kunye necociweyo zonyusa ukhuselo lomzimba kwiintsholongwane, nakwi-HIV, kwaye zinciphisa umngcipheko womhlaza. Yena ngokwakhe sele ethatha ama-clove ambalwa e-garlic ekrwada yonke imihla ukususela ngo-1973 kwaye akazange abe nomkhuhlane.
Ukususela ngo-1950, ugqirha uJ. Klosa waseJamani uye wasebenzisa ikonofile ukunyanga umqala obuhlungu, impumlo evuzayo, nokhohlokhohlo olubandayo. Waseza isigulana ngelixa enuka ioyile yegalikhi.
Kwimikhuhlane, izigulana zihlala zidumba, ukukhohlela, kunye nempumlo. U-Irvin Ziment, waseCalifornia, wafumanisa ukuba ikonofile inokunciphisa ezi mpawu zingasentla, yenza izigulane zingabikhokhohlokhohlo kakhulu, zikhulule iphlegm, ziphefumle ngokulula kwaye zingavaleki impumlo.
Oogqirha basePoland basebenzisa igalikhi ukunyanga isifo sombefu kunye nenyumoniya ebantwaneni.
Namhlanje, izazinzulu ziye zangqina ukuba i-Allicin kwidosi encinci kakhulu emoyeni inokubulala ngokufanelekileyo iintsholongwane zomkhuhlane. Intsholongwane ye-Influenza “ihamba” emoyeni xa idibana neemolekyuli ze-Allicin eziguquguqukayo ezivela kwigalikhi, ziya kutshatyalaliswa ngokukhawuleza. Ikhono legalikhi lokubulala iintsholongwane libuthathaka kakhulu kwaye alixhathisi. Oku kufak’ isandla ekucaciseni isizathu sokuba abantu bayithathele ingqalelo iGarlic njengekhubalo lokukhupha iidemon, ijinga phambi kwendlu yabo okanye inxibe esifubeni somfazi okhulelweyo ukuze kuthintelwe iziphene ekuzalweni kwazo (kuba abantu bamandulo babengazi ukuba omnye unobangela wokuzalwa uneziphene”. usulelo olubi lomkhuhlane kwabasetyhini abakhulelweyo.
Ukunxiba ingxowa yegalikhi phambi kwesifuba kuya kuthintela umkhuhlane ngokufanelekileyo ngexesha lokukhulelwa kunye nokunciphisa iziphene zokuzalwa kwi-fetus). Ukuxhoma ikonofile phambi komnyango kuya kunciphisa ukuxinana kweentsholongwane emoyeni, ngakumbi iintsholongwane zomkhuhlane, ukunciphisa umngcipheko wokugula.
Inzululwazi namhlanje igxininisa ngokukodwa ukusetyenziswa kweoli yegalikhi ekuthinteleni umkhuhlane kunye nokukhohlela kubantu abadala kunye nabantwana. Kuba ngaphezulu kwe-80% yabantwana benokhohlokhohlo lokuqala ngenxa yentsholongwane, amayeza okubulala iintsholongwane awasebenzi kweli nqanaba. Ukuba umntwana ukhohlela, ukunika ioyile yegalikhi kwangoko kuya kunceda ukuthintela iingxaki zebronchopneumonia, inyumoniya ngempumelelo.
Ioli ye-garlic iluncedo kakhulu kuba inamandla okucoca imiphunga, ukukhusela ukuveliswa kwesikhohlela kunye nokubulala iintsholongwane ezinamandla, ngoko ke iluncedo kakhulu kubantu abane-sinusitis engapheliyo. Izazinzulu zikwangqina ukuba kwiimeko zenyumoniya eqatha, ukusebenzisa amayeza okubulala iintsholongwane ngokudityaniswa negalikhi kuya kunyanga esi sifo ngokukhawuleza, ukunciphisa iindleko zonyango.
Ioyile yegalikhi kunye noMhlaza
Kukho izifundo ezininzi eziye zabonisa ukuba ikonofile inamandla okunyanga umhlaza kwizilwanyana zaselabhoratri, kwaye ngoku ivavanywa ukuze kubonwe ukuba ukukwazi kwegalikhi ukunyanga umhlaza ebantwini kuyafana nakwizilwanyana.
Ukusukela ngo-1952, izazinzulu zaseSoviet ziye zaphumelela ekunqandeni ukukhula kweeseli zethumba kwiimpuku.
Uvavanyo lwaseJapan lubonise ukuba ikonofile inokucothisa ukukhula kweeseli zomhlaza wamabele kwiimpuku, kwaye ikonofile ine-antioxidants eyomeleleyo yokuthintela umonakalo weseli obangelwa ziiradicals zasimahla.
Kwi-MD Anderson Cancer Institute Houston, oogqirha basindise impuku kumhlaza wekoloni ngokuyinika isulfure kwigalikhi. Kuyaziwa ukuba i-US National Cancer Institute igxile ekufundeni unyango lomhlaza wale khemikhali yesulfure.
Ioyile yeGarlic yokunciphisa
Ioli ye-garlic kunye ne-dose ye-300mg – 500mg ngosuku (elingana neepilisi ze-6-10) inefuthe elicacileyo lokunciphisa amanqatha esisu ngaphandle kokulimaza umzimba.
Oku kungenxa yokuba ioli ikonofile ithintela ukubunjwa kwamafutha esibindini ngamandla, kwaye kwangaxeshanye ivuselela iiseli zomzimba ukuba inyuse imetabolism idle amandla agqithisileyo.
Ngenxa yendlela yokuthintela ukubunjwa kwamafutha esibindini kwaye inyusa ukutshiswa kwamandla, ioyile yegalikhi iyasebenza ngakumbi kwiimeko zamanqatha esisu, itshabalalisa ngokukhawuleza i-belly fat layer kwindawo yethanga, kodwa idala amandla amaninzi. umzimba, ukunciphisa ukukhathala.
Ioli yegalikhi iyafudumala kwaye ikhuphe amanzi
Izinto zesulfure kwigalikhi, ngakumbi i-Allicin, zinefuthe elichasene ne-asidi, ngokuchasene ne-oxidation yeembrane zeseli, inceda iiseli ukuba zisebenze ngokuqhelekileyo kwakhona, ngaloo ndlela zifudumala umzimba. Xa iiseli zisebenza, ziya kudla amanzi amaninzi emzimbeni kwaye zivelise amandla amaninzi. Yiloo nto ukusela ioli ikonofile uziva ushushu kwaye unxaniwe.
Iimeko zosulelo lomzimba obandayo, abantu abaneempawu ezibandayo ezifana noloyiko lokubanda, amalungu abandayo, umzimba odumbileyo, ubuso obuluthuthu, ukutyeba, ukungagayeki, intloko ebuhlungu engapheliyo, ukuphuthelwa nokungalali kakuhle, ukuchama rhoqo kufanelekile kwioyile yegalikhi.
Ukusetyenziswa okuqhubekayo kuphela kwinyanga enye ukuya kwiinyanga ezimbini kuya kuphucula kakhulu iimpawu ezingentla apha njengokuba umntu efudumala, uyaqina, adle ngcono, ayeke intloko, isiyezi.
Abantu abasebenzisa rhoqo ioli yegalikhi baya kufumana isiqabu kunye nokuqina, izifo ezingapheliyo ezifana neentlungu ezidibeneyo, umqala obuhlungu, umkhuhlane … ziyancipha, abantu bavame ukuba bancinci.
Igalikhi ineqela lezinye izinto ezisetyenziswayo
Uphando lwakutsha nje kwiigundane lubonisa ukuba igalikhi inokuba neziphumo eziluncedo ekusebenzeni kwengqondo, yandise inkumbulo kwaye inokwandisa ubomi.
Isazi ngendalo saseRoma uPliny sabhala ukuba xa ikonofile isetyenziswa newayini, abantu benza uthando ngobuchule. Ngoko ke, abantu baseRoma badla igalikhi eninzi kwaye bayibiza ngokuba yi-aphrodisiac.
Ngokutsho kukaGqr. Pavo Airola, ingcali yezondlo ePhoenix, e-Arizona-USA, ikonofile enemichiza yesulfure, inokunyanga i-lung emphysema eyenza ukuphefumla kube nzima, kungacoleki kakuhle, ukuqhina, imikhuhlane.
Uphononongo lukaGqr D Sooranna kunye no-I Das eLondon lubonisa ukuba ukuthatha igalikhi ngexesha lokukhulelwa kunokunciphisa umngcipheko we-preeclampsia (uxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye neprotheyini kumchamo) kunye nokwandisa ubunzima kubantwana abanokukhubazeka kokukhula.
Kwaye ekugqibeleni, uphononongo olwenziwe kwiZiko leMonnel Chemical Senses, ePhiladelphia, lwafumanisa ukuba xa oomama besitya ikonofile, iintsana ziya kuncancisa ixesha elide nangakumbi kuba ikonofile yonyusa umdla womntwana.
Tôm Hùm Đất giá bao nhiêu? Mua tôm hùm đất ở đâu tại Hà Nội | Hatgiongtihon.net